Bit By Bit - Ny ho avy - 7.2.3 Mifehy in fikarohana famolavolana
Etika dia hifindra avy amin'ny peripheral mampanahy ny foibe fiahiana ary noho izany dia ho tonga ny lohahevitra ny fikarohana.
Amin'ny vanim-potoana nomerika, ny etika dia ho lasa olana fototra mifototra amin'ny fikarohana. Izany hoe, amin'ny ho avy, dia mbola tsy hiady amin'izay mety hitranga sy ny zavatra hafa tokony hatao isika. Raha ny zava-mitranga dia izao no andrasako fa ny fampiharana fitsipika mifehy ny mpahay siansa sosialy sy ny fanentanana dokambarotra momba ny mpahay siansa dia hivoatra amin'ny zavatra iray toy ny fitsipika mifototra voalazalaza ao amin'ny fizarana faha-6. Manantena ihany koa aho fa ny zon'izy ireo dia hiorina amin'ny toerana midadasika kokoa, mitombo ho toy ny lohahevitra momba ny fikarohana ara-fomba. Toy izany koa ny mpikaroka ara-tsosialy ankehitriny izay manokana fotoana sy hery hamolavolana fomba vaovao izay ahafahana mijery tsara kokoa sy manombana tsara kokoa, manantena aho fa hiasa koa isika hampivelatra fomba izay manana andraikitra ara-moraly kokoa. Io fiovana io dia hitranga tsy noho ny fiheveran'ny mpikaroka momba ny etika fa ny fiafarany, fa koa satria miahy ny etika izy ireo ho toy ny fitaovana enti-manao fikarohana ara-tsosialy.
Ohatra iray amin'izany trangan-javatra izany ny fikarohana momba ny fiainana manokana (Dwork 2008) . Alao sary an-tsaina hoe, ohatra, ny hopitaly dia manana firaketana amin'ny antsipirihany momba ny fahasalamana ary ny mpikaroka dia te hahalala ny lamina ao anatin'ireny data ireny. Ny algorithm tsy miankina samihafa dia ahafahan'ny mpikaroka mianatra momba ny endrika samihafa (ohatra, ny olona mifoka dia mety ho voan'ny homamiadana) raha kely indrindra dia mety hampidi-doza ny mianatra zavatra momba ny toetran'ny olona manokana. Ny fampivoarana ireo algorithm voatahiry amin'ny tsiambaratelo ireo dia nanjary sehatry ny fikarohana; jereo Dwork and Roth (2014) ho an'ny fitsaboana boky. Ny tsiambaratelo samihafa dia ohatra iray amin'ny vondrom-piarahamonina mpikaroka izay mametraka fanamby ara-pihetseham-po, mamadika azy ho tetik'asa fikarohana, ary avy eo mandroso izany. Modely iray izay heveriko fa hitombo hatrany amin'ny sehatry ny fikarohana sosialy isika.
Satria ny herin'ny mpikaroka, izay matetika miara-miasa amin'ny orinasa sy ny governemanta, dia mitombo hatrany, dia ho sarotra kokoa ny hisorohana ny olana ara-toekarena. Izany no niainako fa maro ny mpahay siansa sosialy sy ny mpahay siansa momba ny angona dia mihevitra ireo olana ety an-tany ho toy ny sambon-danitra mba hisorohana. Saingy, mieritreritra aho fa ny fisorohana dia hanjary hitombo tsy misy dikany amin'ny tetikady. Isika, amin'ny maha-fiarahamonina antsika, dia afaka mamaha ireo olana ireo raha mitsambikina isika ary mamahana azy ireo amin'ny fahaiza-mamorona sy ny ezaka ataontsika amin'ny olana hafa momba ny fikarohana.